RASMI: Barcelona oo shaacisay faahfaahin ku saabsan qiimaha uu Coutinho ugu wareegay Bayern Munich – Gool FM
RASMI: Barcelona oo shaacisay faahfaahin ku saabsan qiimaha uu Coutinho ugu wareegay Bayern Munich
(Spain) 19 Agoosto 2019. Kooxda Barcelona ayaa shaaca ka qaaday inay kala heshiisay dhigeeda Bayern Munich in xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho uu u dhaqaaqo garoonka Allianz Arena, kaddib markii ay kooxda Bavarian-ka dhankeeda ku dhawaaqday heshiiskan.
Kooxda reer Catalonia ayaa warbixin rasmi ah ay ku shaacisay website-keeda waxay ku sheegtay qiimaha lacageed ay bixin doonto Bayern Munich haddii ay go’aansato inay si toos ah u iibsato addega Coutinho xilli ciyaareedka soo socda.
Bayaan ka soo baxay Barcelona ayaa lagu sheegay:
“Kooxda Barcelona waxay ka heshiisay in Philippe Coutinho uu u dhaqaaqo Bayern Munich xili ciyaareedkan 2019/2020”.
Warka ayaa waxaa intaas lagu sii daray in Bayern Munich ay bixin doonto qiimo dhan 8.5 milyan oo euro iyo heshiis hal sano oo amaah ah, iyadoo heshiiskuna uu qeyb ka yahay in Bayern Munich ay bixin doonto 120 milyan oo euro haddii ay dooneyso in si toos ah ay u iibsato adeega xiddiga reer Brazil xilli ciyaareedka soo socda.
Barcelona ayaa kaga mahadcelisay Philippe Coutinho dadaalkiisa Kooxda waxayna u rajeeyeen wax walba oo wanaag ah waayihiisa cusub.
Waxaa xusid mudan in Philippe Coutinho uu yimid Camp Nou bishii Janaayo ee 2018, kaddib markii uu kaga soo dhaqaaqay Liverpool, wuxuu u ciyaaray 76 kulan, isagoo dhaliyay 21 gool, sidoo kale wuxuu sameeyay 11 gool caawin, isla markaana wuxuu la qaaday 4 koob.
Neymar Jr oo doortay kooxda uu ku biirayo ... Barcelona mise Real Madrid?